Umlando kaMarcel Proust | Izincwadi Zamanje
Umlando ka-Marcel Proust
UMarcel porust wazalelwa phakathi EParis ngo-1871 futhi wafa edolobheni elifanayo ngo-1922 (ngakho-ke kwakungaphezulu kwekhulu le-XNUMX kunele-XNUMX). Uyise wayenjalo U-Adrien proust, udokotela owaziwayo, nonina UJeanne weil, kanye nobudlelwano nabo, obabungqubuzana kwesinye isikhathi, babunendawo ebaluleke kakhulu empilweni ye Ukuziqhenya.
Marcel Wayeyingane yesifuba somoya, etotoswayo futhi evikeleka ngokweqile.
Wenza kahle kakhulu njengomfundi ku- Isikole samabanga aphezulu saseCondorcet futhi wenza inkonzo yezempi e I-Orleans. Wabe eseya ku- University of ISorbonne, kepha ukwenza iziqu zasekolishi bekungekho ezinhlelweni zakhe. Uthando lokubhala seluvukile.
Njengayo yonke insizwa ezisholo ukuthi ingumbhali, bekufanele ibhekane nayo futhi inqobe ubunzima obuhlukahlukene.
Kepha ngesikhathi sobusha bakhe, umbhali futhi wayephila impilo ehlakazekile, ethanda amaphathi kanye nama "salon" adumile lapho kwahlangana khona izikhulu zangaleso sikhathi.
Ngaleyo minyaka bahlala ndawonye ku Ukuziqhenya ukuthanda kwakhe impilo ekha phezulu, ukunethezeka nabesifazane abahle (okukhokhela umama wakhe ngezinye izikhathi ukukhokhela), kanye nesiphetho sakhe njengombhali nombono womhlaba okubandakanya lokhu.
Ngo-1896 washicilela Ubumnandi nezinsuku, iqoqo lezindaba nama-eseyi.
Kamuva, wasebenza encwadini okwathi ngemuva kweminyaka eminingi yashicilelwa ngaphansi kwegama lika UJean Santeuil (empeleni okwakuwuhlaka lwe Ekufuneni Isikhathi Esilahlekile) yize kamuva awushiya lo msebenzi.
Ngemuva kokushona kukanina ngo-1905, Ukuziqhenya wayezulazula emibuthanweni yezenhlalo, waze waphela iminyaka eyi-10 yokugcina yempilo yakhe eboshwe ngokubhala.
Konke umlobi wayengenaso isikhathi sokukusho, ukubhala, ebusheni bakhe, ngoba wayengemva kothando lwentombazane ethile kulawo "ma-salon", kwavezwa ochungechungeni olukhulu lwamanoveli aqoqwe ngaphansi kwegama Ekufuneni Isikhathi Esilahlekile.
Lo msebenzi uvusa, ngokunembile, ukuthi (lokho) okulahlekelwe yisikhathi (okulahlekile ngezincwadi) emaphathini nasemihlanganweni; futhi kukhunjulwa ukuthi kwakuyini: ubusha.
Ukufuna isikhathi esilahlekile kungumsebenzi omkhulu futhi oyinkimbinkimbi (yize kumnandi ukuwufunda), ngakho-ke akubona bonke abathandi bezincwadi abakhuthazwayo ukuthi baqale ukuyifunda.
Uhlelo lwevolumu yokuqala yochungechunge, Phansi komgwaqo we-swan, kwakufanele azikhokhele yena Ukuziqhenya ngaphambi kokuhlelwa kwabahleli. Owesibili, Emthunzini wamantombazane aqhakazile, yamukelwa ngabagxeki. Futhi amavolumu okugcina ochungechunge ashicilelwe ngemuva kokufa.
Ukuzwela, ubumnandi nokukwazi ukubona imininingwane yeminithi nama-nuances yizimpawu ze- Ekufuneni Isikhathi Esilahlekile futhi of Ukuziqhenya.
Marcel Proust, zakudala zezikhathi zethu, omunye walabo babhali wonke umuntu azi ukuthi kufanele bafunde.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Umlando ka-Marcel Proust